१३ औं तलाबाट हामफालेर मलेशियामा नेपाली युवाले फाले ज्या’न – Daily Lokmandu
भाद्र २, २०७८ बुधबार 242
मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एक नेपाली कामदारले आ’त्मह’त्या गरेका छन् । अवै’धानिक हैसियतमा रहेका ३५ वर्षीय दिपक चौधरीले मलेसियाको सेवराङ्गजायामा आफू बस्ने भवनको १३ औं तल्लाबाट हा’मफालेर आ’त्मह’त्या गरेको बताइएको छ । चौधरी त्यहाँ सुरक्षागार्डको रुपमा काम गर्दै आएका थिए ।
उनको नेपाली ठेगान खुल्न बाँकी रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।उनी सोहि कण्डोमिनियमको छैटौ तलामा अरु देशका श्रमिकहरुसँग वस्ने गरेका थिए । सेक्युरिटि गार्डका रुपमा मलेसियामा कार्यरत रहेका उनी लामो समयदेखि अवै’धानिक अवस्थामा रहेका थिए । आफुलाई कहिले चितवन कहिले नवलपरासी घर वताउने भएपनि घर र ठेगानाको वारेमा पुरै परिचय खुलेको छैन ।
साईबर जाया डोमिनिकमा उनी सेक्युरिटि गार्डको रुपमा कार्यरत रहेका थिए । घटना हुना साथ प्रहरी आएर श’वलाई लिएर गएको र आफुहरुले यो भन्दा थप जानकारी केहि थाहा नभएको साथीहरुले जानकारी गराएका छन । श’व पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा राखिएको पनि दूतावासले बताएको छ ।
Prevघरबाट आफन्तको जान भनेर हिँडेकी १६ वर्षीया कृशलाको शव सडेको अवस्थामा घर नजिकै भेटियो
Nextबल्ल आए माधब नेपाल लाईनमा, यस्तो घोषणा गरेपछि विरोधीहरुले खुलेरै गर्न थाले प्रशंसा !
बल्ल आए माधब नेपाल लाईनमा, यस्तो घोषणा गरेपछि विरोधीहरुले खुलेरै गर्न थाले प्रशंसा ! (497)
घरबाट आफन्तको जान भनेर हिँडेकी १६ वर्षीया कृशलाको शव सडेको अवस्थामा घर नजिकै भेटियो (342)
एमाले फुट्नै लागेका बेला भीम रावल उत्रिए मैदानमा, एमाले कार्यकर्तामा पलायो आशा ! (299)